Maandooriyaha Khamriga & dadkii ka Ganacsanayay oo la qabtay - Awdinle Online
Maandooriyaha Khamriga & dadkii ka Ganacsanayay oo la qabtay
Laamaha amaanka degmada Caabudwaaq ee Gobalka Galgaduud ayaa maanta soo Bandhigay maandooriye u badan Qamri iyo Ragii ka Ganacsanaayay.
Ku xigeenka xeer ilaaliyaha Guud ahna Xeer ilaaliyaha Qaybta 21aad gaashanle sare Cabdullaahi maxamed muuse (kayse) ayaa shalay oo ahayd 9kii Bisha laamaha amaanka ku armay soo qabashada Dadka ka Ganacsada maandooriyaha, kuwaas oo maanta la hor-keenay.
Xeer ilaaliyaha ayaa kala qeyb Galay laamaha amaanka Burburinta maandooriyaha Howlgalka lagu soo Qabtay, waxaana Gaashaanle Sare Cabdullaahi Maxamed muuse kayse uu laamaha amaanka amray Burburinta Qamrigan.
Qamrigan oo ka Kooban dhowr Kortoon ayaa Ciidamada Booliiska oo kaashanayo Kuwa Qaybta 21 aad ee Fadhigoodu yahay Xerada 35 aad ee duleedka degmada Caabudwaaq ku Soo Qabteen howlgal ay ka sameeyeen degmada Canudwaaq.
Previous articleRa’iisul Wasaare Abiy Axmed oo baaq u diray dalalka Afrika
Next articleSafiirka Cusub ee Uk u soo Magacaawday Soomaaliya oo soo gaartay Muqdisho